Iiraan oo ku dhawaaqday inay hakisay heshiiska Nuclear-ka. | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Home Wararka HNN Iiraan oo ku dhawaaqday inay hakisay heshiiska Nuclear-ka.
Iiraan oo ku dhawaaqday inay hakisay heshiiska Nuclear-ka.
Arbaco-8-2019(HNN) Dowladda Iiraan ayaa ku dhawaaqday inay hakad galineyso heshiiskii farsamada Nuclear-ka, kadib markii uu sii xumaaday xiriirka u dhaxeeya Tehran iyo Mareykanka.
Madaxweyne Xasan Rowxaani ayaa sheegay inuu gudaha dalkiisa ku hayn doono uranium-ka la tayeeyay, halkii uu dibedda u iib geyn lahaa, sida ku xusan heshiiska.
“Maanta dowladda Islaamiga ah ee Iiraan waxay hakineysaa labo arrimood; haddaan si kale u dhigo, waxaan joojin doonnaa iibinta labo shey. Laga billaabo maanta, lama iibin doono macdanta uranium-ta ama biyaha culus toona. Go’aanka aan ku dhawaaqnay wuxuu socon doonaa muddo 60 maalmood ah”, ayuu yidhi Rowxaani.
Heshkii 2015-kii ayaa looga gol lahaa in lagu dhimo hamiga Nuclear-ka ee Iran, taas bedelkeedana dalkaasi laga khafiifiyo cunaqabateynta saaran.
Previous articleDHAGEYSO: Guddoomiyaha ururka dhalinyarada Hirshabeelle oo Baladweyne uga dhwaaqay in doorashada guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan dib loo dhigay
Next articleSAWIRRO+DHAGEYSO: Waddo laami ah oo laga dhagax dhigay degmada Shangaani